गाउँमा छैनन् युवाशक्ति - Nepal Bahas Nepal Bahas
गाउँमा छैनन् युवाशक्ति
प्रकाशित मिति : २५ चैत्र २०७५, सोमबार १०:१७
रुकुम (पूर्व) । राहदानी बनाएर तेस्रो मुलुक जानेको सङ्ख्या वर्षेनी बढ्दो छ । बढ्दो बेरोजगारी र घरमै परिश्रम गर्न हिच्किचाउँदा रुकुम (पूर्व)बाट दिनमा दर्जनौं युवा विदेशिइरहेका छन् ।
जिल्ला सदरमुकामदेखि लिएर अधिकांश ठाउँमा युवाको सङ्ख्या पातलिँदै गएको छ । घरको सम्पत्ति बेचेर तथा ऋण काढेर विदेश जाने युवा धेरै छन् । कामको खोजीमा युवा भारत तथा तेस्रो मुलुक जाने क्रम नरोकिँदा वृद्धवृद्धा, केटाकेटी र महिला मात्र गाउँमा भेटिन्छन् । देशमै रोजगारको सिर्जना नहुँदा जति पढेलेखे पनि विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेको जानकार बताउँछन् ।
जिल्लाका युवाको ठूलो हिस्सा श्रमका लागि अमेरिका पुगेका छन् । खाडी मुलुक साउदी, कतार, मलेशियालगायतका देशमा जाने युवाको जमातसमेत उत्तिकै छ । वैदेशिक रोजगारका लागि युवा मुग्लानतिर लागेपछि विकास निर्माण, सामुदायिक अभियानदेखि परम्परा, संस्कारसमेत प्रभावित बनेका छन् । खेतीपातीको काम पनि निकै प्रभावित भएको छ ।
गाउँमा जनशक्ति नहुँदा खेती लगाउन छाडेका जग्गा बाँझिदै गएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रुकुम (पूर्व)लाई गत वर्ष भदौ ५ गते छुट्टै जिल्लाको रूपमा मान्यता दिएको थियो भने असोज १९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत अन्य कार्यालयको उद्घाटन गरिएको थियो । यस अवधिमा कार्यालयको तथ्याङकअनुसार एक हजार ९५५ ले राहदानी लिएका छन् । यस आर्थिक वर्ष सकिने बेलासम्म जिल्लाबाट राहदानी लिनेको सङ्ख्या दुई हजार ५०० नाघेको अनुमान कार्यालयले गरेको छ ।
विदेश जाने अधिकांश २० देखि ३५ वर्ष उमेरसमूहका युवा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले बताउनुभयो । “पछिल्लो समयमा राहदानी बनाउन आउने महिलाको सङ्ख्यासमेत बढेको छ”, प्रजिअ शर्माले भने, “जिल्ला प्रशासनको तथ्याङ्कअनुसार २०७४ मा एक हजार १२७ ले राहदानी बनाएका छन् । यस वर्षको फागुनसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ८२८ ले राहदानी लिएका छन् ।” कार्यालयबाट दैनिक आठ देखि १० जनाले राहदानी लिने गरेको उनको भनाइ छ । जिल्लाबाट महीनामा २५/३० को सङ्ख्यामा राहदानी बनाएर काम खोज्दै अन्य मुलुक जाँदा गाउँ सुनसान बन्दै गएको हो ।
युवा पलायनको योे दरले जिल्लामा बेरोजगारी समस्या थप चुलिँदै गएको पुष्टि हुन्छ । चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिले समेत युवालक्षित स्वरोजगारका कार्यक्रम ल्याउनतर्फ ध्यान नदिएको युवाहरुको गुनासो छ । सिस्ने गाउँपालिकाका स्थानीयवासी भाष्कर रेउलेले स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभूति दिलाउन नेताहरु चुकेको बताए ।
असिनाले हिउँदेबाली नष्ट
विभिन्न स्थानमा परेको असिनाले हिउँदेबाली नष्ट गरेको छ । जिल्लाको अधिकांश ठाउँमा दोस्रोपटक परेको असिनाले गहुँबाली, जौँबाली, तरकारीबाली र फलफूललाई ठूलो क्षति पु¥याएको छ ।
यस वर्ष समय–समयमा हिउँदे वर्षा हुँदा हिउँदे बालीको उत्पादनमा वृद्धि हुने आशामा बसेका किसान चिन्तित बनेका छन् । असिनाले गहुँबाली, जौँबाली, तरकारीबाली र फलफूलमा ठूलो क्षति पु¥याएको किसान टेकप्रसाद रोकाले बताउनुभयो । “सिँचाइ सुविधा नभएको सबै ठाउँमा यस वर्षको वर्षाले गहुँ र जौँबाली राम्रो भएको थियो”, किसान रोकाले भन्नुभयो, “खेतबारी नै सेताम्य हुने गरी असिना परेपछि सबै बाली सखाप बनाइदियो ।” पाक्नै लागेको गहुँबाली र फुल्नै लागेका फलफूलमा असिनाले ठूलो क्षति पु¥याएको किसान बताउँछन् ।
फुल्दै गरेको सुन्तला, मौसम, कागती, आलुबखडा, नास्पातीलगायतका सबै फलफूलमा क्षति पु¥याएको छ । त्यसैगरी गहुँ पाक्नै लाग्दा असिना परेपछि उत्पादनमा कमी आउने भन्दै जिल्लावासी चिन्तित बनेका छन् । सिस्ने गाउँपालिका–५ का किसान प्रकाश विसी भन्नुहुन्छ, “‘नखाऊँ भने दिनभरिको शिकार खाऊँ भने कान्छ बाबुको अनुहार’ भनेजस्तै पसिना बगाउँदै परिश्रम ग¥यो, फल पाउने बेलामा सबै असिनाले लगिदियो ।” कृषिमै निर्भर रहेका जिल्लावासी चैतभित्र दुई पटक परेको असिनाले बालीनालीमा क्षति पु¥याउँदा निराश बनेका हुन् ।
जिल्लामा कूल क्षेत्रफलको चार हजार २०० हेक्टर क्षेत्रफल जमीनमा गहुँ उत्पादन हुँदै आएको छ भने सिस्ने गाउँपालिकाको ७ र ८ नं वडालाई सुन्तला पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । तर यहाँका कुनै पनि किसानले बाली बीमा गरेका छैनन् । त्यसैले वर्षेनी विभिन्न कारणले बालीनालीमा क्षति पुगे पनि किसानले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । किसानले बाली बीमा नगरेकै कारण क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको कृषि शाखा कार्यालय रुकुमकोटले जनाएको छ । (सर्जना कार्कीको सहयोगमा)
काठमाडौं उपत्यका सहित विभिन्न भू-भागमा बिहानैदेखि वर्षा, सतर्कता अपनाउन अपिल
संस्कृत भाषामा आकर्षण
संसद बैठक: हाजिरमा देखिन्छ, हलमा देखिदैनन् सांसद
स्थानीय तहको पालिका प्रमुखमा कांग्रेसले २ सय ५० कटायो, जारी गणनामा ७० ठाउँमा अग्रता
६१७ पालिकाको मतपरिणाम सार्वजनिक, कुन दलले कति जिते ?
रोयल सहकारीले मनायाे २१ औं स्थापना दिवस
मत गणनास्थलमै कुटाइ खाएका घाइते शाही रहेनन
मत गन्न बाँकी छँदै भानु नगरपालिकामा विजयी घोषित भए कांग्रेसका उम्मेदवार
एमालेमा सत्ताउन्माद ! बाजा बजाउन बोलाएर कांग्रेसलाई भोट हालेको निहुँमा दलितमाथि कुटपिट
मतपरिणाम घोषणा गरेको तिन दिनपछि भेटियो सिल नखोलेको मतपेटिका
एमाले सचिव तथा पूर्वमन्त्रीको वडामा एमालेको लज्जास्पद हार
व्यक्तिगत आयकरको सीमा थपेर कर्मचारीको तलब होलसेलमा बढाउँदैछन् अर्थमन्त्री शर्मा
शुक्रबारदेखि अनलाइनबाट व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति
किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्न माग
उद्घाटन भएको वर्ष दिन पुग्दा पनि संचालनमा आएन धरहरा !
६ जना स्रष्टाहरुलाई पुरस्कार तथा सम्मान गरिने
पोखरामा ‘नेपाल फेशननिस्टा २०२२’ सम्पन्न
तपाईको आजको राशीफल कस्तो छ ?
आईपीएल : बैंगलोरले शीर्ष स्थानको गुजरातलाई ८ विकेटले हरायो
सुधिर र रियाको फिचरिङमा जुनी जुनी सार्वजनिक
राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको उपकप्तानमा रोहित नियुक्त